စိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုခွေး — Steemit
ဒါဟာ "သင်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်နိုငျကွောငျးသငျသညျစိတျခစြေ။ " စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအတူလူများတို့အားပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသောခွေးအများအပြားအမျိုးအစားဖနောင့်မဟာမိတ်များကိုဖော်ပြထားတယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပြီ ပထမဦးဆုံးအခွန်အားကျရောက်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသောစိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုခွေးဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, တစ်ဦးချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းလူများအတွက်အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခွေးဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါစိတ်ရောဂါ Service ကိုခွေးလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ဤခွေးနှင့်မည်သို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေတဲ့ခွေးကိုမရလောက်ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ဖနောင့်မဟာမိတ်များကြောင့်အသုံးအနှုန်းနှင့်အတူဆက်စပ်အမည်းစက်များ "စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုခွေး" သူတို့ခေါ်ဆို "စိတ်ရောဂါ။ " ထိုအခါမသန်စွမ်းလူတွေကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအရာစိတ်ခံစားမှုထောက်ခံမှုခွေးရှိပါတယ်။
သူတို့ကလေယာဉ်ပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားနှင့်တိရိစ္ဆာန်များများသောအားဖြင့်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူခွင့်မပြုတဲ့အိမ်ရာအခြေအနေများတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူများ၏ကြီးမားသောအုပ်စုတစ်စုကိုကူညီပေးသောကုထုံးခွေးရှိပါတယ်။ ဥပမာ, Ensminger ရဲ့ခွေး Chloe တစ်ကုထုံးခွေးဖြစ်ပြီး, သူဆန္ဒအလျောက်လူနာနှစျသိမျ့ဆေးရုံများမှသူမ၏ကြာပါသည်။ Lieberman ရဲ့မကြာသေးခင်ကလူနာတစ်ဦးကယင်းစိတ်ရောဂါခွေး certified ရရှိထားပြီး get ကူညီရန်စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုအဘို့, အဘယ်သူ၏ခင်ပွန်းတစ်ဦးလေးနက်, တိုးတက်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှိပြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, သူသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာကိုကန့်သတ်မှဆန့်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူမ၏စံ poodle "ဟုသူမကသူမ၏ခင်ပွန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း, သူမခင်ပွန်းမရှိဘဲအိမ်တော်ထဲကအခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များပေး," Lieberman ကဆိုသည်။ သူမ၏နေအိမ် foreclosure အတွက်ထားကြောင့်နောက်ထပ်လူနာသည်လည်းအမျိုးသမီး, စိတ်ဖိစီးမှုလျှက်ရှိသည်။
သူမလည်းသူမအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အလားအလာဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုနှင့် countersuit အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရဲ့ Lieberman ကဆိုသည်။ သူမ၏ကလေးများတိုင်းပြည်အနှံ့အသက်ရှင်သောကြောင့်ထိုမိန်းမသည်တွေအများကြီးသွားလာရှိပါတယ်, နှင့်သူမ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်ခါတစ်ရံသူမအိပ်ရာထဲကမရနိုငျသောထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Lieberman ကလေးငယ်တစ်စောင်ဖို့ကုထုံးခွေးနှိုင်းယှဉ်: နွေးထွေးမှု၏ခံစားချက်များကို evoking နှင့်စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်း။ "ဒါဟာအမှုအရာလျော့နည်းစိတ်ထိခိုက်သောအခါသူမ၏သတိပေး" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ဒါဟာအတိတ်ကာလတစ်လည်စည်းပါပဲ။ " ဟာနန်ဒက်ဇ် 1996 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းနှင့်သူ 2004 ကနေ 2006 ခုနှစျမှအီရတ်မှတပ်ဖြန့်ခဲ့သည်စက်တင်ဘာလ 11, 2001 ရက်တွင်မြေပြင်သုညမှာပထမဦးဆုံးဖြေဆိုသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အီရတ်ရှိနေစဉ်, ဟာနန်ဒက်ဇ်ကသူ၏လမ်းလျှောက်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်တစ်ဦးစိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကန့်သတ်မယ့်ကျောရိုးဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။ အတွင်းပိုင်းသူလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ရသည်။ သူကအကြမ်းမဖက်နှင့်တုန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည်အိပ်မက်ဆိုး, မသက်မသာအတွေးများနှင့်အိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ "အားလုံးကတော့အနာမြင်နိုင်နေကြတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါကကျနော်ကလူကရှင်းပြပုံကိုဖွင့်။ " ဟာနန်ဒက်ဇ်, ECAD အကူအညီခွေးလေ့နှင့်မွေးဖွားခဲ့ရတယ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်း HEAL Project မှတဆင့် 2010 ခုနှစ်ဝန်ဆောင်မှုခွေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုခွေးနှင့်အတူ PTSD နှင့်အတူစုံတက်စစ်ပြန် HEAL ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်နေဆဲ HEAL စီမံကိန်းနှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်း။ "တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေပါလျှင်သူသိတယ်, ငါကထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူး," ဟာနန်ဒက်ဇ်ခွန်အားကဆိုသည်။ "ဒီခွေးကိုပို Spider-Man သဘောမျိုးရှိပါတယ်။ " ဟာနန်ဒက်ဇ်နေဆဲ PTSD များအတွက်ဆေးဝါးကြာပါသည်။ ရှင်ပေါလု Aragon တစ်ဦး 29 နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားဝါရင့်လည်း PTSD ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by goldbloger5 from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.